बिरामी मिर्गौला - परिहास - नेपाल
प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरामी परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि देशैभरिबाट सुझाव आउन थालेका छन्- अब प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुपर्छ, आराम लिनुपर्छ ।
सुझाव दिनु त राम्रै हो । तर दिइएजति सबै सुझाव लिनु भने राम्रो हुन्न । किनभने सबै सुझाव लिन सम्भवै हुँदैन । सम्भवै नभएको काम गरेपछि कसरी राम्रो हुन्छ ?
शुभचिन्तक, पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता सबैले भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली अहिले बिरामी छन् । वास्तवमा पहिलो कुरो त के भने यो बिरामी भन्ने कुरो नै मिल्दैन । किनभने अहिले जो बिरामी परेको चर्चा छ, त्यो प्रधानमन्त्री ओली बिरामी परेका होइनन् । प्रधानमन्त्री आफैँले भनेका छन्- म बिरामी भएको छैन, मेरो मिर्गौला मात्रै बिरामी भएको हो ।
कुरो त प्रस्टै छ । प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म बिरामी भएकै छैनन् । बिरामी त उनको मिर्गौला मात्रै भएको हो । अब मिर्गौलालाई कसरी ठीक पार्ने हो ? त्यो डाक्टरको काम भयो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता लिनुपर्ने कुरै छैन ।
प्रिय पाठक वृन्द ! अब भन्नुस्, जो मान्छे बिरामी नै परेकै छैन, उसले आराम किन लिने ? अब आराम लिनैपर्ने हो भने पनि बालुवाटारमा जत्तिको आराम त अरु कहाा मिल्ला र ? होइन त ?